Ese maApple Stores muFrance anovhara nekuda kweyechitatu wave ye COVID-19 | Ndinobva mac
Ese maApple Stores muFrance anovhara nekuda kwechitatu wave COVID-19
Tony Cortes | | dzakawanda
Zvitoro makumi maviri izvo Apple zvine muFrance zvakavharwa nekuda kweyechitatu wave ye Covid-19 iyo yakawedzera munyika yeGallic. Ivo vari mumuganhu mamiriro ezvinhu nezvipatara padhuze nekudonha. Nhau dzakaipa, hapana mubvunzo.
Uye ini ndinotaura nhau dzakaipa kwete dzekambani, iyo ine zviwanikwa zvekutsungirira kuvhara pasina kuchikanganisa kana nepadiki, kana kune vashandi vezvitoro, nekuti havazotambura nekuda kwebasa ravo, asi nekuda kwezvinoreva izvo. Isu tave tichigara neanofara coronavirus kweanopfuura gore, uye hapana nzira yekukunda muhondo. Idzo inhau dzakaipa kwazvo.
Muhondo yenyika inofara yatiri kuita kurwisana neiyo coronavirus inofadza, zvinoda kuona kuti hondo dzinokundwa nekuraswa sei zvichienderana nenyika dzakasiyana dzakatarisana nedenda iri. Mwedzi mishoma yapfuura, Europe Akaona "kurerukirwa" kuti hutachiona hwakachengetedzwa sei pasi pekutongwa nezvirambidzo zvakaitwa nenyika yega yega muUS denda iri raiparadza vanhu, naTrump ari kumberi.
Iye zvino Europe inotarisa zvine godo kuNorth America, uko kwakapfuura 50% yehuwandu hwevanhu uye nekufungidzira kwakanaka, tichiri pano isu tichiri muchikamu chekutanga chekubaiwa, nevanodonhedza, uye tichitya wechitatu wave wave kutowedzera kuburikidza neFrance.
France Parizvino iri pakuchenjerera nekuda kwedenda iri, uye mamwe matunhu ane akaomarara kupfuura mamwe. Mazhinji eApple Stores emunyika aramba akavharwa, nepo mamwe akaita seApple Champs-Élysées, Apple Opera, Apple Marché Saint-Germain neApple Lille, acharamba akavhurika kusvika nhasi Mugovera, Kubvumbi 3.
Zviripachena, Apple haina kuseta zuva rekuvhurazve. Zvese zvinoenderana nekuti mafambiro echitatu eCOVID-19 anopfuura sei, ayo akapararira kuburikidza nenyika dzeGallic. Pane kudaro, 270 Apple inochengetera muUnited States inosara kuvhura, uye nekuona nekumhanya kwehutsinye kwekuti vanhu vese vari kubayiwa jekiseni, zviri pachena kuti havachavharizve. Vanozozviita chete pazororo, sezvazvinofanira kuve.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Ese maApple Stores muFrance anovhara nekuda kwechitatu wave COVID-19
Maitiro ekumanikidza kuitiswa kwechikumbiro paIntel iyo yakagadzirirwa maMac neM1
Zviri Pamutemo: John Ternus, Apple Mutevedzeri Mutevedzeri weMutungamiri weHardware Injiniya